Waa maxay siyaabaha lagu kordhinayo iibka Amazon UK?
Milkiilayaasha Amazon waxay bilaabeen ganacsigaan iyagoo ah dukaanka onlineka ah. Sannadkan Amazon ayaa u dabaal-dagaya sannad-guuradii 20-aad ee ugu waynayd ee internet-ka ah. Waa tusaale wanaagsan oo ah sida sabirka iyo shaqada adag ay u noqon karto ganacsi yar oo maxalli ah oo loo maro mashaariicda ganacsiga adduunka ugu caansan.
Caan ka mid ah moobiilkan ayaa kor u qaadaya iibiyeyaasha. Sida laga soo xigtay xogta tirakoobka, $ 88,000 ayaa la bixiyaa daqiiqad kasta oo caalami ah oo ku yaal boggan ganacsi. Sidaa darteed, waa fursada ugu fiican ee iibiyeyaasha si ay u horumariyaan ganacsigooda halkaas oo ay kor u qaadaan dakhliga guud.
Si kastaba ha ahaatee, ma ahan mid fudud sida hore u ahayd, si kor loogu qaado iibinta Amazon. Maalin kasta kumanaan baayacmushtariyiin cusub oo online ah ayaa isku dayaya nasiibkooda moobiilkan, kadibna tartanka ayaa sii kordhaaya horumarka joometeriga. Taasina waa sababta ay u muuqanayso muuqaalkani; waxaad u baahan tahay inaad ogaato siyaabo khaas ah sida loo kordhiyo iibkaaga Amazon UK iyo inaad awood u yeelatid inay ku noqdaan dhaqanka.
Qoraalkan waxaa loogu talagalay inuu muujiyo sida loo wanaajiyo xisaabtaada Amazon ganacsigaaga si aad u aragto macaamiishaada ka iman kara adduunka oo dhan. Sidaa daraadeed aan ka wada hadalnay qaar ka mid ah tabaha ugu fiican ee Amazon.
Awoodda dib u eegista dabiiciga ah lama dhimi karo. Waxay lagama maarmaan u yihiin kobcinta ganacsiga sida isticmaalayaasha ay abuuraan go'aankooda iibsashada iyadoo lagu saleynayo dib u eegista alaabtaada. Guud ahaan, go'aanka iibsigu waa go'aan qaadashada macaamiisha mustaqbalka ee ku saabsan macaamilka hore ee suuqa inta lagu iibsanayo alaab ama adeeg. Dib u eegista badeecadaha wanaagsan ee aad haysatid, ayaa sarreeya waxaad ku dari doontaa bogga natiijada raadinta ee Amazon. Marka loo eego xogta tirakoobka, in ka badan 88% macaamiisha ayaa hubiya jawaab celinta ku saabsan alaabta ka hor intaadan iibsan.
Ganacsi ganacsi oo mustaqbalka ah, waxaad u baahan tahay inaad ka fikirto wixii ka baxsan ee muuqata oo raadi siyaabaha ugu fiican ee loo soo saaro jawaab celin. Tusaale ahaan, waxaad ka heleysaa dib u eegista alaabtaada oo ay ku jiraan multimedia. Dhammaan dib u eegista sawirada wax soo saarka ama fiidiyowyada unbinging ayaa waxay faa'iido u yeelan karaan hagaajinta wacyigelinta caankaaga. Waxaad ku dhiiri galin kartaa macaamiishaada inay sameeyaan dib u eegida hal abuurka ah ee qiime dhimis ama hadiyad. Haddii aad taqaano dadka deegaanka ah ee ku riyaaqay alaabtaada, ka dibna weydii inay ka tagaan dib u eegista boggaaga Amazon. Intaa waxaa dheer, waxaad isticmaali kartaa barnaamijyo warcelin oo kala duwan si kor loogu qaado miisaanka dib u eegista oo la soo celiyo jawaab celin dhexdhexaad ah ama diidmo ah.
Ka faa'iideysiga bixiyeyaasha
Sidaan horey u soo sheegnay, ra'yi-celin wax ku ool ah waxay si weyn u saamayn kartaa darajada boggaaga ee Amazon. Si aad u soo saarto jawaab celin tayadeed oo cusub, waxaad ku siin kartaa macaamiishaada qiimo jaban si loogu beddelo dib u eegis. Natiijo ahaan, waxaa laga yaabaa inuu si dhakhso ah u wanaajiyo darajadaada raadinta Amazon oo kaa caawiya inaad kordhiso iibintaada.
Waxaa intaa dheer, waa fikrad wanaagsan in la sameeyo si caadi ah. Waxay kaa caawineysaa inaad abuurto muuqaal wanaagsan oo ku saabsan calaamaddaada iyo inaad sameysid farxad. Haddii isticmaalayaashu joogaan si ay u qancaan tayada alaabtaada, waxay u badan tahay inay kuugu yimaadaan waqti dambe Source .